M/weynihii hore ee Mali Ibrahim Boubacar Keita ayaa wadanka ka baxay sababo caafimaad awgii… – Hagaag.com
M/weynihii hore ee Mali Ibrahim Boubacar Keita ayaa wadanka ka baxay sababo caafimaad awgii…
Posted on 6 Seteembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Madaxweynhii hore ee Mali Ibrahim Boubacar Keita oo la afgambiyay bishii August ayaa waddanka ka tagay.
Saraakiisha milatariga ayaa sheegay in Keita uu sababo caafimaad ugu duulay Isutagga Imaaraadka Carabta kadib markii toddobaadkan gudihii dareemay xanuunka istaroogga.
Keita oo 75 sanno jir ah ayaa Talaadadii la dhigay isbitaal ku yaalla magaalada Bamako, lix maalmood kadib markii ay xoriyaddiisa dib u siiyeen hogaamiyaasha miltariga ee xilka kala wareegay 18-kii August.
Mar sii horreysay hogaamiyaasha miltariga ee la wareegay talada dalkaasi Mali ayaa magaalada Bamako ka bilaabay wadahadallo u dhaxeeya iyaga, mucaaradka iyo urururada bulshada. Waxaana wadahadaladaasi diiradda lagu saaray sidii loo soo dhisi lahaa dowlad rayid ah.
Hogaamiyaasha Galbeedka Afrika ayaa doonayaa in dalka Mali si dhakhsiya looga hirgaliyo dowlad rayid ah kadib afgambigii madaxweyne Keita. Hogaamiyaasha Afgambiga ayaa sheegay iney muddo laba sanno gudohood ah ay xilka ku baneyn doonaan.